माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता प्रकाशले मतदान गरे, बाबुरामले गर्दै - Everest Dainik - News from Nepal
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता प्रकाशले मतदान गरे, बाबुरामले गर्दै
गोरखा, मंसिर १० । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता एवम् गोरखा जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ को प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ ले शिरानचोक ८ जौबारी स्थित परोपकार उच्च माध्यमिक बिद्यालयको मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन ।
उनका प्रतिस्पर्धी नयाँशक्ति पार्टी नेपालका बाबुराम भट्टाईले गोरखाको पालुङटार नगरपालिका – १ को अन्नपूर्ण मा.वि. खोप्लाङ केन्द्रमा मतदान गर्ने छन।
याे पनि पढ्नुस १० किलो अवैध सुनसहित दुई पक्राउ
गोरखा क्षेत्र नं. २ पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३७ प्रतिनिधिसभा सदस्य मध्ये सबै भन्दा चर्चित स्थान हो । प्रकाश वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार हुन । भने उन प्रतिस्पर्धीमा लामो समय एउटै पार्टीका सहकर्मी भट्टाई चुनावी मैदानमा छन ।
याे पनि पढ्नुस निर्वाचनका लागि तयार रहन गृहमन्त्री निधीको निर्देशन
ट्याग्स: Gorkha, Prakash